ဇူလိုင် 2020 » Page2of 8 » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Month: ဇူလိုင် ၂၀၂၀
ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အားလက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၂၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၂၉ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများ ပြီးဆုံး၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Jurgens အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၂၀
ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေး ပစ္စည်းများ၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများပေးအပ် လှူဒါန်း
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၂၀ တပ်မတော်အနေဖြင့် (Covid-19 ) ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကာလအတွင်း နိုင်ငံ အနှံ့ရှိ အထူးကုဆေးရုံကြီးများ ၊ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးများ၊ ခရိုင်ဆေးရုံများ၊ မြို့နယ်ဆေးရုံများ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံများနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ (Covid-19 ) ရောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြု ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ၊
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ၊ နယ်မြေခံရေတပ်စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် – ၂၀ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွန့်ဝင်းဆွေနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ရှိ၊ နယ်မြေခံရေတပ်စခန်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ (Covid-19)ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ တက်ရောက်(ရုပ်သံသတင်း)
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ – ၂၀
တပ်မတော်သားတိုင်းတစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးအတွက် ကျန်းမာ၊ ကြံ့ခိုင်၊ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိအောင်လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်စည်းကမ်းကောင်းမွန်ရေးနှင့် အမိန့်နာခံမှုရှိစေရေး အဓိကထားလေ့ကျင့် ရမည်ဖြစ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပူတာအိုတပ်နယ် ဧက(၅၀၀) ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံ(နမ့်တာလဲ)သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ကောင်းမှုလုံစေတီတော်အား ဖူးမြော် ကြည်ညို
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ငါ့သရောက်မြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာများရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးကာ မကွေးတပ်နယ်ရှိအရာရှိ၊ စစ်သည် မိသားစုဝင်များအားတွေ့ဆုံ အမှာစကားပြောကြား (ရုပ်သံသတင်း)